homosexuals लागि मृत्यु दण्ड गैर-धर्मशास्त्रीय छ | Apg29
तिनीहरूले मसीही विश्वास गर्न सन्दर्भ यो। 
येशूले स्वीकार गर्नेहरूलाई सुरक्षित र किनभने परमेश्वरको अनुग्रहको सुरक्षित गरिनेछ। यदि परमेश्वरको अनुग्रहको अवस्थित छैन हामी कुनै पनि सुरक्षित र उद्धार हुनेछ। बाइबल सबै पाप र परमेश्वरको महिमा छोटो आएका छन् भनेर भन्छन्।
युगान्डा मा homosexuals लागि मृत्यु दण्ड
आज विश्व युगान्डा फेरि आयातित भनेर लेख्छन् मृत्यु दण्ड utlevd समलिङ्गीहरूले मा। तिनीहरूले मसीही विश्वास गर्न सन्दर्भ यो। तर को पाठ्यक्रम यो पूर्ण unbiblical छ।
तिनीहरूले ख्रीष्टियनहरूलाई-फेरि जन्म भने, तिनीहरूले पुरानो नियमको मा आज्ञा र येशूको र अनुग्रहको अब सुसमाचारको लागू बुझ्छु।
समलिङ्गीहरूले अफ्रिकी महादेशमा मा सबै भन्दा देशहरूमा अवैध छ। अमेरिका को एक मुट्ठी मा समलिङ्गी जीवन कैद वा मृत्यु दण्ड पूरा। युगान्डा मा, अब समलिङ्गी सेक्स को लागि जीवन कैद छ।
बचत गर्न आए
येशूले मृत्यु कसैलाई निन्दा गर्न होइन आए। उहाँले सुरक्षित र मान्छे उद्धार गर्न आयो।
यूहन्ना 3:16। परमेश्वरको लागि त उहाँले उसलाई नष्ट मा हुँदैन तर अनन्त जीवन छ जसले विश्वास छ कि, आफ्नो एक मात्र छोरा दिनुभयो कि संसारमा प्रेम गर्नुभयो। 17 को लागि परमेश्वरले संसारको निन्दा संसारमा आफ्ना पुत्र पठाउनुभयो तर संसारको उहाँमार्फत सुरक्षित हुन सक्छ ।
याकूबले Rudenstrand को को सहायक महासचिव छ स्वीडिश एभान्जेलिकल गठबंधन । Twitter मा, उहाँले यस्तो लेख्छन्:
"यो अनुग्रहको सुसमाचार विपरीत छ कि एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था छ।"
म तर सहमत सक्दैन। तपाईं त्यो व्यभिचार प्रतिबद्ध थियो पछि येशूलाई भेटे जो स्त्रीलाई के भयो सम्झना गर्छन्? यस को लागि त्यो stoning संग खतरामा परेको थियो, तर के भयो?
यूहन्ना 8: 2nd तर बिहान सबेरै उहाँले फिर्ता मन्दिरमा आए, र सबै मानिसहरू उसलाई आए। र उहाँले बसे र तिनीहरूलाई सिकाउनुभयो।
3. तिनीहरूले व्यभिचार लिइएका एक स्त्रीले उहाँलाई शास्त्री र फरिसीहरूको ल्याए। तिनीहरूले बीचमा उनको सेट थियो जब र,4तिनीहरूले उहाँलाई भने: मास्टर, यो महिला व्यभिचार को कार्य मा समातियो।5मोशाले यस्तो ढुंगाले हानेर पर्छ भनेर, व्यवस्था हामीलाई आज्ञा दिनुभयो। तर तपाईं के भन्छन्?
6 तर तिनीहरूले उहाँलाई आरोप कुरा हुन सक्छ भनेर उहाँलाई परीक्षण गर्न भने यो। तर येशूले तल बाङ्गो र आफ्नो औंला जमीनमा लेखे।7अनि तिनीहरूले उहाँलाई सोधेको जारी गर्दा, उहाँले उठे र पाप बिना छ जसले तपाईंलाई एक उनको मा पहिलो ढुङ्गा, तिनीहरूलाई भन्नुभयो। 8 अनि उहाँले तल stooped र जमीनमा लेखे।
9 तिनीहरूले यो सुने र विवेक द्वारा दोषी महसुस गर्दा तिनीहरूले बाहिर एक एक गरेर, प्राचीन पहिलो अप अन्तिम गए, र येशूले अघि उभिरहेका महिला संग एक्लै बाँकी थियो।
10 येशूले उठे र महिला बाहेक जो कोहीलाई पनि हेर्न भएन, त्यो उनको भन्नुभयो, नारी, जहाँ तपाईँको accusers छन्? कुनै एक तपाईं दोषी छ?
11 उनले भने: प्रभु, छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, न त म दोषी गर्छन्। जाने र पाप कुनै थप।
येशूले न्यायाधीशहरूले कुनै homosexuals
जसरी येशूले न्यायाधीश रूपमा व्यभिचार को गम्भीर पाप गर्ने महिला सुनाइसकेको थियो त्यो न त समलिङ्गीहरूले को गम्भीर पाप गर्नेहरूलाई। बरु, उहाँले तिनीहरूलाई मुक्तिको र उद्धार प्रदान गर्दछ। येशूले, कि सुरक्षित छन् जो हामी पनि तिनीहरूलाई मुक्तिको, र मुक्ति येशू ख्रीष्टमा प्रदान गर्दछ।
पुरानो नियममा यो विभिन्न पापको लागि मृत्यु दण्ड मा भन्छन्, तर हामी एक reconciler प्राप्त गरेका रूपमा यो नयाँ नियममा छैन - येशू ख्रीष्ट। उहाँले सबै मस्सा पाप लिनुभयो र मृत्युबाट हामीलाई सुरक्षित गर्न हाम्रो ठाउँमा मृत्यु दण्ड लिनुभयो। तसर्थ, हामी विश्वास द्वारा येशू ख्रीष्ट पाउँदा अनुग्रह द्वारा सुरक्षित छन्। त्यसपछि चमत्कार हुन्छ - हामी सुरक्षित र क्षमा गरिएका छन्।
पनि कुनै मृत्युको न्याय फेरि जन्म
साँचो जन्म मसीही न्यायाधीशहरूले छैन मृत्यु, तर उहाँले उहाँलाई प्राप्त गर्न सक्छन् र सुरक्षित र उद्धार गर्न भनेर येशूले प्रस्तुत गरेर न्याय उहाँलाई सुरक्षित गर्न सबै गरिरहेको छ।
इस्लाम मा, त्यहाँ homosexuals मार्न भनेर देशहरूमा र समूहहरू छन्। तर हामी त सुरक्षित र येशूमा विश्वास गरेर क्षमा गर्ने गर्छन्। हामी येशू हाम्रो उद्धारकर्ता छ छ। उहाँले हाम्रो पाप लिएको र परमेश्वरको हामीलाई मिलाप भएको छ। तर इस्लाम तिनीहरूले कुनै उद्धारक छ। जहाँ व्यवस्था कठोर र निर्दयी छ।
त्यहाँ एक न्याय छ
पछिल्लो न्याय - यो भने भइरहेको, म त्यहाँ न्याय हो भनेर स्मरण गराउन चाहन्छु। यो त culprits जो आफु येशूले सुरक्षित होस् छैन प्रयास गर्नुपर्छ छ। तर यो न्याय येशूले विश्वास बिना मृत्यु भएका ती यसलाई नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी हुन्छ बस अघि निन्दा गर्न उठ्नेछ जब मिलेनियम, पछि ठाउँ लिन्छ। पाठ्यक्रम त्यसैले यसलाई येशूको छैन गम्भीर छ।
तर अब, यो युग मा अनुग्रहको सुसमाचारको अझै पनि आउँछ। अब, मान्छे अझै पनि येशूले स्वीकार गर्न र सुरक्षित र उद्धार गर्न मौका छ। येशूले सबैको दण्ड लिनुभयो किनभने उहाँले कलवारी तिनीहरूलाई लागि मृत्यु हुँदा।
येशूले तेस्रो दिन मा ब्यूँती। आज, तपाईं जीवित र पुनरुत्थान हुनुभएको येशू प्राप्त गर्न सक्छन् र सुरक्षित हुन!
तर यो homosexuals मृत्यु योग्य कि नयाँ नियममा छैन? यहाँ अरू सबै कुरा जस्तै हो। एक कुराहरू dislodge हुनु हुँदैन, consciously पाठ विकृत वा बेहोश अवस्थामा हतार र unbiblical शिक्षा निर्माण।
त्यसैले यहाँ यो बाइबल मा भन्छन्:
रोमी 1:32। तिनीहरूले के गर्ने ती [समलिङ्गीहरूले बस्ने] परमेश्वरको धार्मिक उर्दी थाहा मृत्युको योग्य , अहिले सम्म तिनीहरूले मात्र नै, तर पनि यसो गर्नेहरूले संग सहमत हुनुहुन्छ।
कि यो homosexuals मृत्युदण्ड पर्छ भनेर भन्न गर्दैन, ध्यान दिनुहोस्। यो सिर्फ तिनीहरूले "मृत्यु योग्य हुनुहुन्छ।" भनेर भन्छन् बाइबल हामी सबै पाप हुनाले र यो सबै मान्छे योग्य हुनुहुन्छ। येशूले बाहेक सबै पाप छ। तर हामी उद्धार र प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास मार्फत परमेश्वरको अनुग्रह द्वारा सुरक्षित गरिनेछ!